Heano Maitiro Ekumisikidza yako Blog kune Zvemukati Kushambadzira | Martech Zone
Zvisinei nezverudzii rwezvinhu zvauri kugadzira, yako blog inofanirwa kuve iyo yepakati hub yezvinhu zvese kushambadzira zvemukati. Asi unoita sei kuti uve nechokwadi chekuti central system yegadziriro yakagadzirirwa kuti ibudirire? Neraki, kune mamwe akareruka tweaks ayo anowedzera kuwedzera kugovera uye kuve nechokwadi chekuti vateveri vako vanoziva chaizvo zvavanofanirwa kuita zvinotevera.
Zvakachengeteka kutaura nhasi kuti vanhu vanoda mifananidzo. Muchokwadi, chinyorwa chine mifananidzo chiri pamusoro pe2x chinowanzo kuve chinogoverwa pane chinyorwa chisina. Kunyanya kutaridzika kufadza yako blog positi iri, iri nyore mukana wekugovaniswa. Ita shuwa kuti ako akanyanya kufambidzana munharaunda mabhatani akaiswa zvine mukurumbira pakutanga kweimwe posvo uye iwe uchaona 7x zvimwe zvinotaurwa.
Mugwara rekuona pazasi, Chikamu Chechishanu uye Inboardly shandisa mamwe matipi ekuti uve nechokwadi chekuti blog yako yakagadziridzwa uye yakagadzirira vashanyi, kugovana uye kutendeuka. Kana iwe uchida kudzidza zvakawanda nezve yakanakisa nzira dzekuparadzira zvemukati mako, maitiro ekugadzirisa yega yega chiteshi mhedzisiro mhedzisiro, tora midhiya kuiswa uye kuyera ROI - unogona kurodha pasi. Yekupedzisira Nongedzo Yekugovanisa Kugovana.
Regai tizive zvimwe zvaunoita kukwezva vaverengi kune yako blog pazasi mune zvakataurwa.
Tags: BlogContent MarketingctainfographicMarketingoptimizationRoyiseoevanhu vezvenhaumumagariro uchapupu
Aug 6, 2014 pa 3: 21 AM
Mhoroi, ndiri kugadzira blog mune wordpress uye ichi chinyorwa chinondibatsira kuti ndiwedzere icho. Kupfuura izvo zvemukati iyo info info inotsanangura zvakawanda. Iye zvino ndave pachena nezvekuti blog rinofanira kutaridzika sei. Kutenda nekutumira.
Aug 26, 2014 pa 8: 08 AM
Asi zvemukati zvinofanirwa kuenderana ne blog zvakanaka Kana zvisina hukama nzira dzinogona kushandisa kuwana zvisina basa traffic.
Gumiguru 14, 2014 pa 1:27 AM
Ndatenda nechinyorwa… ndinotenda kuti ichi chinyorwa chinondibatsira kukwirisa bhurogu yangu